मनोरञ्जन – Page2– MediaNP
५ तस्विरमा हेर्नुहोस फेसबुकले जुराएको भद्रगोलका जयन्तेको सुन्दर परिवार हेर्नुहोस्
नेपाली चर्चित हास्य टेलिश्रंखला ‘भद्रगोल’ का लोकप्रिय कलाकार गोविन्द कोइराला ‘जयन्ते’ भद्रगोलकै कारण चर्चामा रहेका छन् । उनले म्यूजिक भिडियो देखि लिएर फिल्महरुमा समेत अभिनय गरिसकेका छन् । भद्रगोलमा उनको हाँसो सहित लामो स्वरमा काका भन्ने
पोखराको स्विमिङ पुलमा नायिका प्रियंका कार्कीको हट तस्बिर (फोटो फिचर)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००८:००0
काठमाडौं, २९ वैशाख । नायिका प्रियंका कार्की सधैं चर्चामा आइरहनेमा पर्छिन् । खासगरी प्रेम सम्बन्ध, तस्बिर र पहिरनका कारण उनको चर्चा धेरै हुने गरेको छ । पछिल्लो समय उनका केही तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन्
शाहरुखकी अनस्क्रिन छोरीको बोल्ड तस्वीरले सामाजिक सञ्जालमा मच्चायो खैलाबैला (तस्वीर सहित)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००६:२९0
काठमाडौँ । सन् १९९७ मा ब्लकबस्टर फिल्ममा शाहरुखको छोरीको भूमिकामा देखिएर अञ्जलीको भूमिका निभाएकी बालिका सना सइदको बोलड तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । ‘कुछ कुछ होता है’ फिल्म हेर्ने जो कोहीले उनलाई सजहै
सलमानको आग्रहमा नाम परिवर्तन गरेकी आलिया भट्टले आखिर के राखिन् त नाम ?
काठमाडौँ । बलिउड स्टार सलमानले बलिउडमा एउटै नाम गरेका दुई अभिनेत्री हुन सक्दैनन् भनेपछि आफुले नाम परिवर्तन गरेर कियरा राखेको अभिनेत्री आलिया भट्टले बताएकी छन् । ‘फिट अप विद द स्टार्स सजन टु’ को एक
हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको जन्मदिन , कति बर्ष लागे होलान् ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००५:२६0
काठमाडौं, २९ वैशाख । हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको आज जन्मदिन । २०३१ वैशाख २९ गते ताप्लेजुङको खेबाङमा गजुरेलको जन्म भएको हो । यस आधारमा आज उनी आफ्नो ४५औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । जन्मदिनमा आइतबार बिहान उनले फेसबुकमा
बलिउडका प्रतिक्षित फिल्महरू टक्करमा, कुन फिल्मले कस्तो पाउला त चर्चा ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००५:०१0
काठमडौँ । पछिल्लो समय फिल्मका विषयवस्तुहरु चल्न सुरु गरेपछि बलिउडका निर्माताहरु ठूला स्टारसँग जुध्न थालेका छन् । यसै क्रमलाई लिएर बलिउडमा सन् २०२० मा बहुप्रतिक्षित फिल्महरु बिच भिडन्त हुने भएको छ । सलमान खानले २०२० को
सलमानको ‘दबंग ३’ मा शाहरुखको केमियो, कस्तो बन्ला त फिल्म ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०११:२३0
काठमाडौँ । बलिउडका अभिनेताहरुमा जति शत्रुता कायम रहेको छ त्यो भन्दा धेरै मित्रता छ । केही यस्तो मित्रता भएको व्यक्ति रहेका छन्, जसको मित्र भाव देखेर जल्नेहरु कयौँ रहेका छन् । यस्तै पछिल्लो समय अभिनेता
पूर्व पत्नी जेनिफिरलाई डेट गरिरहेको खबरलाई लिएर यसरी मजाक उडाए ब्राड पिटरले
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०१०:५३0
काठमाडौँ । हलिउड अभिनेता ब्राड पिट र उनकी पूर्व पत्नी जेनिफर एनिस्टनको प्रेम सम्बन्धको बारेमा फेरि चर्चा भएको छ । सन् २००५ मा ब्राड पिटले डिभोर्स गरेर दुवैले अरुसँग विवाह गरेका थिए । त्यसपछि एन्जेलिना जोलीसँगको